တရုတ် 90mm ဖြတ်တောက်ထားသည့်ပလတ်စတစ်အဖုံးလူမီနီယမ်ချိန်ညှိနိုင်သောအလင်းရောင် Lens ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Simons
မျက်နှာပြင် Downlight တပ်ဆင်ထားသည်
မှန်ဘီလူးဖြင့် 90mm ဖြတ်တောက်ထားသည့်ပလတ်စတစ်အဖုံးလူမီနီယံချိန်ညှိ Downlight
ဒီအလင်း၏အလူမီနီယံအိမ်ရာပလပ်စတစ်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူစီးကူးမှုပစ္စည်းများ၊ အတည်ပြုထားသောအပူလျှပ်ကာဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ 40 °အသုံးပြုသောအနုပညာလက်ရာများနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်သင့်တော်သည်မှန်ဘီလူးရွေးချယ်စရာ။
အသေးစိတ်ပုံစံ & ပုံစံများ
1. 30 °ရောင်ခြည်ထောင့်
2. အပူကူးကူးပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလူမီနီယံအိမ်ရာ၊ V-0 မီးလျှံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။
3. 220-240V built-in ယာဉ်မောင်း, ဘက်ပေါင်းစုံဒီဇိုင်း။
4. မရရှိနိုင်ပါ dimmable / Triac dimmable ။
option ကို 5. 5000K, 4000K, 6000K ။
၆။ အာမခံ - ၃ နှစ်။
44000hrs မှ 7. L70 ။
(၈) ထူးကဲစွာမှိန်မှိန်လုပ်ဆောင်မှုသည်ထိပ်တန်းမှိန်စက်များအပါအ ၀ င်အမှတ်တံဆိပ်မှိန်စက်အများစုအတွက်သင့်လျော်သည်။
၉) Dimmer အမျိုးအစား - အစွန်းလိုက်၊ 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
၁၀။ ပလပ်စတစ်ဖုံးအုပ်ထားသောအလူမီနီယမ်အိုး၊ တပ်ဆင်ထားသောယာဉ်မောင်း၊ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောအသွင်အပြင်
11. Adjustable ဦး တည်ချက်, SMD chip ကို။
input ဗို့အား 200V-240V CRI (Ra>) 80,90
Power Factor > 0.9 အလုပ်လုပ်နေသောကြိမ်နှုန်း 50 / 60HZ
ပါဝါ 6W, 10W, 12W ရပ်သွားသည် 90mm
အချင်း 105mm အမြင့် 65mm
အပူချိန် -20 ～ 50 ℃ တစ်သက်တာ 30000h
အိုင်ပီအဆင့်သတ်မှတ်ချက် IP40 သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ ပလတ်စတစ်အဖုံးလူမီနီယမ်
အလင်းရင်းမြစ် အယ်လ်အီးဒီ LED Chip COB
CCT 3000K, 4000K, 5000K, 6000K Beam Angle ၃၀ ဒီဂရီ
အလင်းအရောင် သဘာဝ / နွေး / အအေး တပ်ဆင်ခြင်း ရာဝတီ
70-90lm / w
ရှေ့သို့ 70mm cut-out Plastic Cover လူမီနီယမ်ချိန်ညှိနိုင်သောအလင်းအိမ်နှင့်မှန်ဘီလူး
နောက်တစ်ခု: 90mm Cut-out ၀ န်ထမ်း 15W 3-CCT Adjustable Gimbal Downlight
Q1 ။ နမူနာအချို့ရနိုင်မလား။
Q2 ။ အမှာစာပေးပို့မည့်အချိန်ကဘာလဲ။
ပုံမှန်အမှာစာအတွက် ၂၅ မှ ၃၀ ရက်ဖြစ်သည်။
Q3 ။ ဖောက်သည်များကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှပ်စစ်မှဖွဲ့စည်းပုံအထိကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် R&D အဖွဲ့ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များသူတို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းကိရိယာတန်ဆာပလာဖွင့်လှစ်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြသည်။
Q4 ။ သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။
T / T, LC ။ OA ကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
Q5 ။ သင်၏စက်ရုံသည်အရည်အသွေးကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်သနည်း။
အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ IQC, IPQC နှင့် OQC တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်းလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအားစစ်ဆေးခြင်းအားလုံးသည် ISO အရည်အသွေးစံနှုန်းပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
150mm ဖြတ်တောက်ထားသည့် Flat Fascia SMD Downlight
70mm cut-out Plastic Cover လူမီနီယမ်အဖုံး ...
90mm Cut-out Aluminum Coated Plastic Tri-အရောင် ...
90mm cut-out ပလတ်စတစ်အဖုံးလူမီနီယမ်ချိန်ညှိ ...
70mm ဖြတ်တောက်ထားသည့်အနက်ရောင်နက်ရှိုင်းသောသုံးရောင်စုံ SMD ဒေါင်း ...
90mm Cut-Out နက်ရှိုင်းသောနစ်မြုပ် Tri-color SMD Downl ...
70mm ဖြတ်တောက်ထားသည့် Flat Fascia Plastic Cover လူမီနီယမ် ...
90mm Cut-out ပလတ်စတစ်အဖုံး Aluminum Flat Fasci ...
Cutmm 150mm SMD ၀ န်ထမ်း Downlight
ဖြတ်တောက်ထားသည့် 200mm SMD ၀ န်ထမ်း Downlight
70mm ဖြတ်တောက် WIFI / Bluetooth Smart CCT Changeab ...
90mm WIFI / Bluetooth Smart CCT Changea ...
10F, အမှတ်3Zhongwan လမ်း, Xinglin, Jimei ခရိုင်, Xiamen, Fujian, တရုတ်